Madonna tụpụtara robots centipede NFT - CoinWorldMap
Madonna na-emepụta robots NFT centipede
Mee 11, 2022 Nft
Ka ụwa crypto na-ekiri ka Terra UST stablecoin dara, ọkwa dị omimi na-adaba na mgbawa. Madonna ewepụtala nchịkọta NFT mbụ ya na mmekorita ya na onye na-ese ihe bụ Biple, usoro vidiyo nke Madonna dijitalụ na-egosi n'ụzọ doro anya ọmụmụ nke ahịhịa na anụmanụ dị iche iche.
Ndị NFT - nke n'eziokwu ọ nweghị onye jụrụ - gụnyere ihe ngosi siri ike nke osisi, urukurubụba na, dịka ọkacha mmasị onwe ya, robots centipede na-apụta site na ikpu onye ọbụ abụ. N'ime ha, Madonna na-agụkwa uri n'olu dị egwu, nke bụ ngwakọta nke okwu nke ya na nke onye na-ede uri Peasia Rumi.
Dị ka Madonna si kwuo, Nne nke Creation were otu afọ iji wuchaa Mike Winkelman (onye na-ese ihe a maara dị ka Beeple). Atọ Nft SuperRare gbara ya na Wednesde. Ọ bụ ezie na nke a bụ ahụmahụ mbụ onye na-agụ egwú na-emepụta NFT, Winkelmann bụ onye a ma ama maka ire ere dijitalụ collage Ọrụ gara aga maka $69 nde na Christie's, ụlọ mbụ NFT rere ere.
Mgbe ọ ghọchara ndenye ego abalị n'abalị gara aga, Winkelmann nwere echiche na-adịghị mma banyere NFT n'agbanyeghị na ọ na-etinye aka na esemokwu akara ngosi B20 n'onwe ya, ọbụlagodi na-akpọ ahịa ahụ afụ.
"Achọghị m ịhụ ka ndị mmadụ na-atụfu ego na ahịhịa iji nweta ego," Beeple tweeted na Machị 2021. Ọ na-akpọ mmekorita NFT na Madonna "nnukwu nsọpụrụ."
Ego niile ga-enweta ga-aka ndị ọrụ ebere atọ na-akwado ụmụ nwanyị na ụmụaka gburugburu ụwa. Agbanyeghị, n'etiti oke mbelata nke cryptocurrencies, amabeghị onye ga-azụta NFT - ọkachasị nyere na vidiyo ọ bụla dị maka nbudata na webụsaịtị gọọmentị na pịa bọtịnụ.
Mkpasu iwe maka ebumnuche dị elu
Madonna kwuru na N'ajụjụ ọnụ ya na New York Times, "Ọ dịghị mgbe m chọrọ ịbụ mkpasu iwe naanị maka mkpasu iwe." Ha na-eguzo maka olileanya. Ha na-akwado teknụzụ. "
Anyị ga-ahapụrụ gị ya ikpebi okwu a.
Dina n'elu akwa ụlọ ọgwụ na-adịghị mma, katoon Madonna na nsụgharị dijitalụ mbụ bụ na ụkwụ ya gbasaa, osisi na-eto eto site na ikpu ya. "Ọ na-emegide ike ndọda na okooko osisi na-eto," ka ebe nrụọrụ weebụ motherofcreation na-ekwu. Madonna, "Nne nke okike", na-agụ uri onwe ya na olu siri ike, jiri ndụ osisi tụnyere ndụ nwanyị.
NFT nke abụọ nke Madonna bụ ezumike nnabata
E jiri ya tụnyere osisi, ikiri urukurubụba bụ ihe na-enye ahụ efe gọziri agọzi. Vidiyo a naanị ezuola ime ka ị jụọ ịdị mma gị, mana ọ bụrụ na ikiri atọ ahụ, ị ​​nwere ike ịnụ ụtọ vidiyo a n'ezie.
“Butterflies bụ ihe atụ nke ihe mgbagwoju anya: ụwa na-ere ọkụ n’oge ọdịnihu gachara, ma a ka nwere ihe àmà nke ndụ,” ka nkọwa nke ihe nkiri ahụ bụ́ Mother of Evolution na-agụ.
“Anyị nọgidere na-amụ nwa, n’agbanyeghị ihe mbibi ọ bụla mere, n’agbanyeghị ókè mmegbu anyị chere. Nke a bụ ozi dị mkpa na ọ bụrụ na ichere ka ụwa zuo oke ma ọ bụ ndụ gị zuru oke iji mepụta nka, ọ gaghị eme."
Ọ ga-amasị gị ịnweta robot centipede?
Na n'ikpeazụ, kacha mma maka ikpeazụ. N'akụkụ nke atọ, akpọrọ "Nne nke Teknụzụ," Madonna na-awụpụ robots centipede na-akpụ akpụ, nke, dịka o doro anya, na-egosipụta ma ike na-enye ndụ na ihe ize ndụ nke nkà na ụzụ.
"Nkà na ụzụ na-aga n'ihu na-etolite n'ụwa anụ ahụ, nke okike na n'ezie; anyị nwere ike ime ihe ọ bụla anyị chọrọ, mana ọ na-eju ya anya, Madonna kwuru. "N'ikpeazụ, ọdịdị ga-emeri."
Na-egwu egwu, onye America mụrụ Madonna's NFT triptych na-abịa n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ isi maka US, ebe ikike ụmụ nwanyị na-eyi egwu mmachibido ime ime na ebe ikike ụmụ nwanyị na-eyi egwu site na mmachi ime na ikike mgbanwe nke Roe v. Wade. Na Nne Nature , onye na-agụ egwú na-ese onyinyo ndụ nke osisi na nwanyị.
“M kụziiri onwe m ka m na-agbanwe agbanwe ka m ghara imebi. Ma ọ bụ ezie na ndị na-eri anụ na-adọpụ mkpụrụ m, na-ewepụ ogbugbo m, gbutuo alaka m, gbutuo m, kpọọ m ọkụ n'ala - ha agaghị emebi ihe m bụ ma ọlị, ha agaghị ewepụ ebube m, ha agaghị emenyụ mkpụrụ obi m. " Madonna kwuru.
Ọ bụ ezie na nchịkọta NFT ọ bụla - hapụ naanị otu dị ka nke a - enweghị ike ịhapụ ndị ọcha Republican ka ha kpebie ihe ha ga-eme na ahụ ha, usoro a na-ahapụ n'ezie mmetụta siri ike nke nwanyị. Ma ọ bụrụ na Madonna anaghị azụ ahịa NFT ya dị ka Melania Trump si eme, mgbe ahụ opekata mpe ego a ga-enweta ga-agara ndị ọrụ ebere lekwasịrị anya ụmụ nwanyị.
Nchịkọta NFT nke Madonna na Beeple na-ere na Wednesde. O siri ike ikwu otú ihe osise a ga-ewu ewu, Otú ọ dị, dị ka Madonna si kwuo: "Oge na-aga nwayọọ nwayọọ maka ndị na-echere - ọ dịghị oge maka ịla azụ."
Oraichain na-akwado ọrụ arụrụ arụghị nke ọma
Ọsọ 3D metaverse na ụlọ ọrụ P2E